टिप्पणी मंगलबार, साउन १४, २०७६
हिमाल खबरपत्रिकाको ‘लोक–परिकार विशेषाङ्क’ देखेपछि मित्र प्रभु पराजुलीले सोधे, “लोक–परिकार भनेको लोकल परिकार हो ?”
झल्याँस्स भएँ, मैले त ‘लोक’ र ‘लोकल’ लाई दाँजेर हेरेकै रहेनछु ।
हेरौं न त !
लोक = समान संस्कृति, भावना र सामाजिक स्थिति भएका खास भौगोलिक इकाइमा रहने मानिसको समुदाय; जनसमूह (नेपाली बृहत् शब्दकोशले दिएको सान्दर्भिक अर्थ) ।
लोक–परिकार = परम्परादेखि लोकजीवनमा चलिआएका खानेकुरा (ने.बृ.श.ले दिएको लोककथा, लोकगाथा, लोकगीत आदिको शब्दार्थका आधारमा तयार गरिएको परिभाषा) ।
लोकल = स्थानीय, रैथाने । कुनै खास ठाउँसित सम्बन्धित वा सीमित (अंग्रेजी शब्दकोशले दिने अर्थको सार) ।
‘लोक’ र ‘लोकल’ बीचको सम्बन्धलाई व्युत्पत्तिशास्त्र (इटिमोलोजी) ले कसरी केलाउँदो हो ? संस्कृत र ल्याटिनका अरू सयौं शब्दमा जस्तै यिनका बीचमा पनि केही न केही सम्बन्ध त होला ।
त्यो केलाउने काम भाषाशास्त्रीहरूको । हामी अर्थमै रमाऊँ !
लोकगीत भनेको कुनै ठाउँविशेषका रैथाने गीत नै हो, तर पनि लोकगीत लोकल–गीत होइन; जसरी लोककथा लोकल–कथा होइन। लोककथा, लोकगीत, लोकदोहोरी, लोकभाका, लोकभाषा, लोकसंस्कृति, लोककला, लोकतन्त्र जस्ता सबैमा लोक नै मिल्छ, लोकल कसैगरे पनि मिल्दैन ।
अर्कातिर, ‘लोकल कुखुरा’ भने लोकल नै हो, ‘लोक कुखुरा’ होइन । लोकल साग, लोकल मकै, लोकल खसी, लोकल रक्सी आदिमा पनि ‘लोक’ सुहाउँदैन ।
शिक्षा र आधुनिकताको राजमार्गबाट आएको अंग्रेजीको ‘लोकल’ लयालु, श्रुतिमधुर शब्द हो । यसैले होला, यो अंग्रेजी विशेषण नेपाली विशेष्यहरूसित यस्तरी घुलमिल भयो कि खास माने नजान्नेका लागि समेत आफैं अर्थिन थाल्यो ।
‘मरुञ्जेल लोकल ठर्रा खाएर लोकल मान्छेलाई धम्क्याउने लोकल दादाहरू लोकल नेताले हप्काएपछि मात्र थान्को लागे’ भनेको पनि पूरै नेपाली जस्तै सुनिन, बुझिन थाल्यो । आफ्नो ‘स्थानीय’ त यसै बिरानो थियो नै, ‘लोकल’ भन्ने गैर–लोकल शब्दले ‘रैथाने’ लाई पनि पराइ बनाइदियो ।
आधुनिक मान्छेको जिब्रो नौला कुरामा रमाउँछ । अप्ठ्यारो भए तिनलाई कच्याककुचुक पारेर जिब्राले सजिलो बनाउँछ । परिकार पनि नौलै मन पर्छ ।
लोक संस्कृति अर्थात् लोकगीत, लोकगाथा, लोक–परिकार आदि हाम्रो पहिचानका अङ्ग हुन् । तर खेतीपातीमा आएको परिवर्तन, बसाइँसराइ तथा फेरिंदो जीवनशैलीका कारण हाम्रो लोक संस्कृति पहिलेकै रूपमा रहिरहन गाह्रो मात्र होइन, असम्भव नै छ ।
आधुनिकताको डरलाग्दो पक्ष यही हो । ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने जस्तै, आधुनिकताको राजमार्गमा नदौडौं– संसारसित कसरी चाल र ताल मिलाउनु ? दौडौं– गरीब समाजका सदस्यहरूलाई आफ्नोपनको भारी बोकेर धनीहरूसित दौडिन साँच्चै गाह्रो हुन्छ ।
आफ्नोपन हराएको समाजको पहिचान पनि हराउँछ । कुनै पनि समाज र समुदायको असली पहिचान उसको चालचलन, रहनसहन, बोलीचाली र खानपिनले प्रतिबिम्बित गर्छ । नारा, जुलूस र राजनीतिक आन्दोलनले दिने पहिचान कागजमा सीमित हुन्छ ।
यहाँ हामी लोक संस्कृतिको महत्वपूर्ण पक्ष लोक–परिकारहरूको कुरा गर्दैछौं । यस प्रसङ्गमा भन्नैपर्ने चिन्तालाग्दो कुरा हो– हाम्रा लोक–परिकार दिनहुँ हराउँदैछन्, बिर्सिइँदैछन् ।
तर आशलाग्दो कुरा पनि छ– धेरै परिकार चुलाबाट हराए पनि मनमा ज्यूँदा छन् र जगाउन सकिने अवस्थामा छन् । तर आफ्ना लोक–परिकारहरू जोगाउन हामीसित अन्तिम दुई दशक जति समय मात्र बाँकी छ ।
अहिले ६० वर्षमाथिका वयोज्येष्ठ व्यक्तिहरूसित सोधखोज गर्ने, आवश्यक सामग्री जुटाएर पकाउन बनाउन सिकाइमाग्ने हो भने हाम्रा परिकार–परम्परा जोगिन सक्छ ।
अलिकति जागरुक हुने हो भने एक दुई वर्षमा नै बिर्सिइन लागेका धेरै कुराले पुनर्जीवन पाउनेछन् । यसमा स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको अग्रसरताको अत्यावश्यक र अपरिहार्य छ ।
लोकतन्त्र र लोक–परिकार
नेवार जातिकाे विशेष परिकार 'याेमरी' ।
संघीयताको सबभन्दा ठूलो विशेषता के हो भने यो राजनीतिक व्यवस्थामा आफ्नोपन जोगाउन अरूलाई गुहार्नु पर्दैन । उदाहरणका लागि, झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले नगरपालिकाभित्रका परिकारहरूको सूची बनाएर ‘मेचीनगर परिकारमाला’ भन्ने मेनु बनायोे, र आफ्ना कार्यक्रममा खाजाका रूपमा विभिन्न समुदायका रैथाने खानेकुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गर्‍यो भने आलोचना होइन, प्रशंसा पाउँछ ।
दाङका तुलसीपुर–घोराही नगरपालिकाको अग्रसरतामा कुखुरालाई बध्या गर्ने (खसी पार्ने) विधिमा स्थानीय थारूहरूको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार कायम गर्ने प्रयत्न शुरू भयो भने सिङ्गो थारू समुदाय आर्थिक रूपले लाभान्वित पनि हुनसक्छ ।
मिथिला कला बनाउने कलाकारहरूले लाभ पाए जस्तै, पकाई–बनाई गर्ने व्यक्तिहरू, खासगरी गृहिणी महिलाहरूले लाभ पाउने गरी जनकपुरमा एउटा ‘मिथिलाक भोजनालय’ खोल्ने हो भने त्यो चर्चित र अनुकरणीय हुनसक्छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्रका सबै समुदायको चाड पर्व अनुसारको परिकार–पात्रो बनायो भने त्यो अर्को ऐतिहासिक काम हुनसक्छ । यस्ता उदाहरण सयौं हुनसक्छन् ।
सार हो, लोक–परिकारहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लोकतन्त्रको अर्थात् स्थानीय सरकारहरूको एकदमै प्रभावकारी भूमिका हुनसक्छ ।
लोक–परिकारहरूको प्रवद्र्धन भयो भने के हुन्छ त ?
आफ्नोपन जोगिन्छ । हराउन थालेका अन्नपात जोगिन्छन् । लोक–पर्यटनको विकास हुन्छ ।
पाठकलाई लाग्न सक्छ, फेरि नयाँ शब्द— लोक–पर्यटन आयो !
मलाई ‘पर्यटक’ र ‘आन्तरिक पर्यटक’ भन्ने भेद अस्वाभाविक, अमिल्दो, अप्ठ्यारो लाग्छ ।
मलाई मात्र होइन, ‘इकोटुरिजम’ भन्ने अंग्रेजी शब्दका लागि जबर्जस्तीसित बनाइएको नेपाली शब्द ‘पर्या–पर्यटन’ तपाईंलाई पनि अर्थ–न–बर्थको लाग्दो हो ? पर्यटन (परि‌अटन) मा कहिल्यै नसुनेको, शब्दकोशमा अर्थ नभएको, कसैले नबुझ्ने ‘पर्या’ किन जोड्नुपरेको होला ? संस्कृतकै शब्द किन चाहिएको होला ?
एकपटक हामी केही नेपालीभाषी भारतीय आफन्तहरूसित घुम्न हिंडेका थियौं । सिद्धान्ततः उनीहरू पर्यटक थिए र हामी आन्तरिक पर्यटक । तर हामीबीच केही फरक थिएन । गैरआवासीय नेपालीहरू यहाँ घुम्न आउँदा उनीहरू आन्तरिक कि बाह्य पर्यटक ?
बरू लोक–पर्यटन उपयुक्त हुन्छ । अंग्रेजीको ‘इकोटुरिजम’ का लागि सबभन्दा उपयुक्त शब्द लोक–पर्यटन नै हुन्छ । छुट्याउनै पर्छ भने गाउँघरमा जाने, लोकजीवन, लोकसंस्कृति र रैथानेपनलाई नबिथोली ‘लोकको हित’ गर्ने पर्यटकलाई लोक–पर्यटक भने हुन्छ ।
कसैलाई लाग्न सक्छ ‘इको’ को अर्थ ‘लोक’ होइन । जवाफ हो, ‘इको’ (इकोलोजी, इकोनोमी) भनेको ‘पर्या’ पनि होइन । सबै कुरा शब्दानुवादबाट मात्र अर्थिंदैनन् । तर भावानुवाद गर्न भने धैर्य चाहिन्छ ।
चुरो कुरो– लोक–पर्यटनका लागि लोक–परिकारहरूको ठूलो महत्व हुन्छ । हामी आफैं घुमफिर गर्न हिंडेका बेला, आफैं पर्यटक भएका बेला के चाहन्छौं भन्ने सोचौं, जवाफ आफैं पाइन्छ ।
हामी जहाँ जाँदा पनि नौला कुरा हेर्न, नौला स्वाद चाख्न र नौला कोसेली किन्न चाख राख्छौं । आफूले हेरे–देखेका, किनेका र चाखे–खाएका कुराका बारेमा सकभर धेरै कुरा जान्न चाहन्छौं ।
भारतको आग्रा गएका बेला रैथाने पेडा बारे कसैले राम्रोसित बतायो, अझ बनाएकै देखायो भने हाम्रो झोलामा त्यसैको कोसेली थपिन्छ । दक्षिण भारत गएका बेला केराका पातमा साम्भरसित भात वा इडली खानमै मन जान्छ ।
कसैले ती परम्पराहरूको अर्थ र इतिहास पनि बताइदियो भने हाम्रो मन अझ रमाउँछ ।
रैथाने खानेकुराहरू जाग्ने र मौलाउने सबभन्दा उर्वर ठाउँ ग्रामीण पाहुनाघरहरू हुन् (त्यसो त मलाई घरबास पनि होमस्टेको ठाडो अनुवाद लाग्छ ।) पाहुनाघर सञ्चालकहरूमा रैथाने खानेकुराप्रति आत्मविश्वास जगाउन, पाहुनालाई तिनका बारे चाखलाग्दो गरी जानकारी दिन र खाँटीपन कायम राखेरै परिमार्जन गर्न भने, फेरि पनि स्थानीय सरकारहरूकै भूमिका हुनसक्छ ।
उनीहरूले नै उपयुक्त स्रोतव्यक्ति र सहभागी छानेर लोक–पर्यटनको तालीम दिन सक्छन् ।
यसो हुन सकेमा धेरै कुरा जोगिन्छन् । सबभन्दा राम्ररी जोगिने कुरा हुन्, बसाइँसराइको झार उम्रेका गाउँघरका पुराना ठूला घरहरू, मासिंदै गरेका रैथाने बालीहरू, मौसमी हिसाबले वनजङ्गलबाट प्राप्त गरिने वनबालीहरू र ती सबैसित जोडिएका परम्पराहरू ।
नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु हुन २०–२१ साता मात्र बाँकी छ !